Simbi inogadzira zvigadzirwa nevatengi uye fekitori - China Simbi mabhendi Vagadziri
Muti wehupenyu Simbi inochengeterwa
Chinyorwa: Yakakwira mhando simbi. Kuvakwa kwesimbi kwese kunoita kuti bhuku rekushongedza rigume rinogara kwenguva refu uye rakasimba kubata mabhuku makuru uye anorema; upfu-yakavharwa pamusoro inotsvedza uye inorwisa-ngura.
Mavara aripo: Durable poda yakavharwa nhema, chena, pink, bhuruu, yero ruvara nezvimwe.
Saizi: 6 ”L x 5 x D x 6.7” H kana yakagadzirirwa hukuru.
Logo: Yakasarudzika logo inowanikwa.
Kushandisa: bhuku rakarongeka, chikuru chipo chako kana mabhuku ebhuruki.
Kavha: Yakachengeteka kurongedza, brown brown bhokisi kurongedza, ruvara bhokisi kurongedza kana Yakasarudzika kurongedza.
Nguva yekuenzanisira: mazuva 5-7.
Nguva yekugadzira: Kazhinji mazuva 15-20. Nguva yekugadzira inotaurika.
Kutumira: nendege, negungwa uye nechitima.
FOB chiteshi: Guangzhou chiteshi / Shenzhen chiteshi.
Payment mazwi: TT / Paypal / Western Union kana nhaurirano mubhadharo mazwi.
Premium Anti-static Paint & Round Edges: Super yakatsetseka uye yakati sandara yepamusoro pendi pamusoro uye yakatenderera mativi ita shuwa kuti ako masherufu kana mabhuku haawane chero kukwenya kana scuff mamaki.
Yakashongedzwa BIRD Metal inochengeterwa
Dhizaini: Yakashongedza simbi mabhuku.
Chinyorwa: Yakakwira mhando simbi, yakasimba, yakasimba.Iine anti slip pads pazasi.
Kukura: 5 "L x 5 x D x 7" H. kana yakagadzirirwa.
Pedza: Durable upfu zvemapuranga nhema, chena, pink, zvitema, yero ruvara etc.
Pasuru: 1set / bhokisi, 24sets / katoni.Gamuchira zvakagadziriswa zvipo bhokisi bhokisi.
Usage: Dhizaini hombe yekubata mabhuku, maCD etc.
Gamuchirai OEM & ODM dhizaini. Makore gumi nemashanu ezviitiko uye zvikwata zvehunyanzvi zvinopa zvizere mhinduro kune ese marudzi eshiti simbi yekushongedza zvinhu.
Yakashongedza Simbi inogadzira
Dhizaini: Yakashongedza simbi bookend.
Kukura: 4.7 "L x 3.7 x D x 6" H. kana yakagadzirirwa.
Inoyerera Metal Masherufu
Dhizaini: Isingaonekwe madziro akaiswa akatenderera sherefu.
Kukura: 5 "L x 6" D x 2.5 "H. Yakagadzirwa nesimbi-inorema simbi, yakasimba kwazvo & yakasimba, Bata 10kgs +.
Pedzisa: Poda yakaputirwa nhema.white, bhuruu, pingi, grey mavara nezvimwe.
Pasuru: 2pcs / 3pcs / 4pcs seimwe yakaiswa mubhokisi. Zvinoenderana nezvinodiwa.
Usage: Bata mabhuku pamadziro.
KUSVIRA TREE mabhuku
Dhizaini: Yakasarudzika TREE mabhuku ekugadzira Dhizaina yakasimba yekushongedza zvinhu.
Kukura: 4.7 "L x 3.7 x D x 7" H.
Pedza: Poda yakaputirwa matte nhema.
Makiyi Ekubata Hook, Simbi Madziro Art, Kiyi Hook Murongi, Bhachi Hanger Rack Hooks, Wall Hanging Kudyara Bhureki, Dyara Pot Hanger,